Madaxweyne Farmaajo iyo ururada bulshada oo ka wadahadlay arimaha doorashooyinka – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Madaxweyne Farmaajo iyo ururada bulshada oo ka wadahadlay arimaha doorashooyinka – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay waxaa ku kulmay madaxweynaha dowladda soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ururada bulshada rayidka, kuwaasi oo Dhuusamareeb u jooga shirka dowladda federaalka iyo madaxda maamul gobaleedyada ku yeeelanayaan magaaladaasi.
Madaxweyne Farmaajo iyo ururada bulshada rayidka ayaa isla meel dhigay inta uu shirka socday muhiimadda uu leeyahay hannaanka geedi socodka siyaasadeed ee dalka, dadaallada xasilinta dowladnimada iyo sii-amba-qaadidda qorshaha Qaran ee qabsoomidda doorasho daah-furan.
Cismaan Muxuyadiin Shaatax guddoomiyaha ururada bulshada rayidka oo kulanka Madaxweynaha kaddib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulanka looga hadlay xaalada uu xiligan marayo dalka.
Ururada bulshada rayidka ayaa mudooyinkii dambe waday kulamo ay la qaadanayaan madaxda dowladda ito maamul goboleedyada iyaga oona u sheegayay in khilaaf waliba lagu dhammeeyo wadahadal iyo is afgarad islamarkaana lisu tanaasulo si dalka hormarkiisa loogu shaqeeyo.
Sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa tilmaamay in loo baahanyahay in doorashada dalka ee la filayo inay ka dhacdo ay noqoto mid ku qabsoonta waqtigeeda iyada oo laga fogaanayo eex iyo isdaba marin.
Previous Shirka Dhuusamarreeb waa fursaddii ugu dambaysay ee madaxweyne Farmaajo
Next Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Deni iyo Axmed madoobe – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia